China Hexaphenoxycyclotriphosphazene Mveliso kunye neFektri | Ukuxubana
Ifomula yeMolekyuli: C36H30N3O6P3
Inkangeleko: Mhlophe umgubo crystalline
Umxholo: ≥ 99%
Hexaphenoxycyclotriphosphazeneine-P eyahlukileyo, isakhiwo se-hybrid, esibonisa uzinzo oluphezulu lwetrama, ukudodobala kwelangatye, isalathiso se-oksijini ephezulu (i-LOI) kunye nokusebenza komsi ophantsi. It is a addalo halogen-free nelangatye nekudodobalisa. Isetyenziswa ngokubanzi kwi-resin ye-epoxy, i-laminate egqoke ubhedu, i-diode yokukhanyisa ukukhanya kwe-LED, i-powder coating, i-potting material kunye ne-polymer material. Luhlobo lwezinto zokucima umlilo kunye nezinto zokucima umlilo
Le mveliso yongezwa kwilangatye elingenalo i-halogen-free, elisetyenziswa ikakhulu kwi-PC, PC / ABS resin, PPO, nylon kunye nezinye iimveliso. Xa le mveliso isetyenziswa kwi-PC, xa umxholo we-hpctp uyi-8-10%, inqanaba ledangatye lemveliso lifikelela kwi-FV-0; le mveliso inefuthe elihle lokudangatye kwilangatye kwi-epoxy resin, kwaye inokusetyenziselwa ukulungiselela i-EMC yokupakisha okukhulu kwesekethe, kwaye ukusebenza kwayo kwelangatye kulunge ngakumbi kunenkqubo ye-phosphorus ye-bromine evuthayo yendabuko; Le mveliso inokusetyenziswa kwi-Benzoxazine Resin yelinen yelinen yeglasi, kwaye xa umxholo we-hpctp uyi-10%, inqanaba ledangatye elidlulayo lifikelela kwi-FV-0 Imveliso inokusetyenziswa kwi-polyethylene, ixabiso le-LOI lezinto ezilawulayo zedangatye ezinokufikelela kwi-30 ~ 33 ; imveliso inokongezwa kwisisombululo se-viscose fiber spinning yokufumana ifayibha ebuyisa ilangatye ye-viscose fiber ene-index ye-oxidation ye-25.3 ~ 26.7
Le mveliso luhlobo lwekhompawundi kunye no-P no-N njengamathambo asisiseko. Ubume bayo buzinzile, kwaye akukho ngxaki yongcoliseko lwe-halogen. Xa itshisa, akukho gesi inetyhefu kwaye akukho ntlekele zimbini.
Ingasetyenziselwa kwizinyibilikisi eziphilayo, kwaye inokunyamezela ubushushu obuphezulu, amanzi kunye neoyile ixesha elide.
Inokulibazisa okuhle kwelangatye kunye nokudibanisa okuncinci. Ngokubanzi, xa umxholo we-BDP uyi-8-10%, inqanaba lokulibala kwelangatye lemveliso linokufikelela kwi-FV-0, eyi-50% ye-BDP kunye ne-RDP.
Ngenxa yolwakhiwo oluzinzileyo kunye nenani elincinci lezongezo, iipropathi zeemveliso kunye nezinye izinto azitshintshwanga ngexesha lokusetyenziswa.
Le mveliso yikristale emhlophe. Ayifuni ukufudunyezwa ngexesha lokusetyenziswa, kwaye ayifuni ukupakisha okhethekileyo kwezothutho. Kukulungele ukusetyenziswa kunye nokuthuthwa.
Ukupakisha: 20kg / ingxowa
Amanyathelo okhuseleko: gcina kwindawo yokugcina izinto epholileyo, eyomileyo kunye nomoya.
Amandla oNyaka: Iitoni ezingama-500 / ngonyaka
Okulandelayo: Poly (diphenoxy) phosphazene